The Hot News Weekly Journal | Category Archive | မီဒီယာ
Archive | မီဒီယာ RSS feed for this section The Hot News ၏ facebook page တွင်…လူကြိုက်များခဲ့သောကာတွန်း
The Hot News Weekly Journal ၏ facebook page ဖြစ်သော https://www.facebook.com/hotnewsweekly တွင်ဖေါ်ပြခဲ့သောတစ်ကွက်ကာတွန်း နှစ်ပုံမှ…လူကြိုက်များခဲ့သောတစ်ပုံကို မှတ်တမ်းတင် ပြန်လည်ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။ HN-WT
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမတွင် အိုဘားမားမိန့်ခွန်းအား လာရောက်ကြသော မီဒီယာ များ
၀ိုင်းစု ဘ၀ဖြတ် သန်းမှု ကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အနုပညာကိုချစ်မြတ် နိုးစွာနဲ့ အနုပညာလမ်းထဲမှာ လျှောက် လှမ်းနေတာပေါ့နော်။ အနုပညာကို ချစ်လို့ လားမသိပါဘူး။ အနုပညာ ကလည်း ၀ိုင်းစုကို ပြန်ကြည့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကလည်း ၀ိုင်းစုကို ချစ်ကြပါတယ်။ ၀ိုင်းစု အနုပညာလောကထဲကို စရောက် တုန်းကတော့ မင်းသမီး ၀ိုင်းစုခိုင် သိန်းအနေနဲ့အား ပေးကြတာပေါ့ နော်။ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ၀ိုင်းစုက သီချင်းလေးတွေလည်း ဆိုလာ တော့ အဆိုတော်ဝိုင်းစုအနေနဲ့ပါ ပရိသတ် ကသိလာတာပေါ့နော်။ နှစ်ခုစလုံး လူသိလာတာ ကံလေး လိုက်လာတယ်ပြောရမှာပဲ။ ကိုယ် တိုင်ကလည်းကြိုးစားပါတယ်။ ၀ိုင်းစုကို သီချင်းအနေနဲ့အရမ်း အားပေးကြ တဲ့ပရိသတ်တွေကို လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တချို့ [...]
သင်္ကြန်ကာလ မြူးကြသောအခါ (သင်္ကြန်အကျနေ့မြင်ကွင်း)
NLD ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့ ပြင်ဆင်ထားပုံ သင်္ကြန်အကျနေ့မှာ NLD ကလည်း ဖျော်ဖြေရေး ကားကြီးနဲ့ မြို့လုံးပတ်လည် မလည့်မီ ရုံးချုပ်ေ ကန်တော်ကြီးရဲ့ ပတ်ပတ်လည်မှာတော့ တိုးမပေါက် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နှစ်ကူးသင်္ကြန်မှာ မန္တလေးကျုံးကြီးပတ်ပတ်လည်မှာ စည်ကားသလိုပါပဲ ကန်တော်ကြီးနဲ့ အင်းယားပတ်ပတ်လည် သင်္ကြန် မြင်ကွင်း တွေကို Hot News ပရိတ်သတ်အတွက် တင်ပြလေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဒီရက်တွေမှာ အရောင်းရဆုံးကတော့ ဘီယာပါ။ ဘီယာတွေ ဈေးဗန်းခင်းထားတာလေးကိုပါ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ X2O ရှေ့ကနေ အမှတ်တရပါ ရေတွေ တော်လျှံနေပြီ။ ကန်ထဲကနေ စက်နှစ်လုံပြိုင် သုံးလုံးပြိုင်နဲ့စုပ်ပြီး ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။ အင်းယားကန်ဘက်ကို ထက်သွားပါတယ်။ ကိုလူမင်းကြီးလည်း မြူးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ သီချင်းသုံးပုဒ်နဲ့ ဖျော်ဖြေသွားပြီး အမြဲတမ်းဒီလိုပျော်ရွှင်နေစေလိုကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းသွားပါသေးတယ်။ သီဆိုဖျော်ဖြေပြီးချိန်မှာတော့ ရေပိုက်ကိုင်ပြီး ရေပတ်နေပါသေးတယ်။ အင်းယားကန်ထောင့်က [...]
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲသို့ Asean Election Observer အဖွဲ့လာရောက်ကြည့်ရှု
ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် အ.ထ.က (၁) ကျောင်းသို့ Asean Election Observer အဖွဲ့များ ရောက်ရှိလာပြီး မဲပေးသူပြည်သူများကို မေးမြန်း၍ မဲပေးနေမှုကို ကြည့်ရှုသွားသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ အာဆီယံအဖွဲ့ရောက်ရှိလာပြီး မဲရုံးမှူးမှ မဲပေးနေသည်များကို သတင်းသမားများအား ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ပြုထားသည်ကို ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ပါလာသူက သတင်းထောက်တစ်ဦးအား အတင်းဆွဲထုတ်။ သတင်းသမားမှ မကျေနပ်။
13 .3. 2012 အတွဲ (၂) အမှတ် (၄) လွှတ်တော် သတင်းလွှာ “ ဧရာတိုင်းက လှိုင်းခတ်သံ” ဧရာတိုင်း ကိုယ်စားလှယ် – ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ကိုယ်စားလှယ်စကား – ပြည်သူ့ကိုယ်စား ကိုယ်စားလှယ်တင်ပြချက် – ပြည်သူ့ခံစားချက် တို့နှလုံးသားဆန္ဒ – ပြည်သူ့အတွက်ဖော်ပြ ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေကြီးလွှတ်တော်မှ ထုတ်ဝေသော လွှတ်တော်သတင်းလွှာ နောက်ဆုံး စာစဉ် အတွဲ(၂) အမှတ်(၄) စာစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုလိုသူများ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သတင်းလွှာ ကို ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည် ။
ဦးခင်ရွှေ (ဇေကမ္ဘာ)အား `အပြစ်မမြင် အချစ်ဝင်ပေးပါရန်´ ပန်ကြားခဲ့တဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြည်သူတို့၏တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာ ဆိုင်ရာကောက်မတီဥက္ကဌ၏ အံလွဲနေသော စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ
မိမိတို့သည် ပြည်သူများကရွေးချယ် တင်မြောက်ထားသောကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့အကျိုး သယ်ပိုးဖော် ဆောင်ပေးရန် တာဝန်ရှိပါတယ်။ ပထမ အကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပထမ ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဇန်န ၀ါရီလ (၃၁)ရက်နေ့မှ မတ်လ (၃၀)ရက် အတွင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို (၁၈)ရက်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပထမ အကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယ ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ထူးခြားမှုမှာ- ““ပြည်သူ့အသံ – လွှတ်တော်အသံ”” ““ပြည်သူ့ဆန်္ဒ – လွှတ်တော်ဆန်္ဒ”” ““ပြည်သူတို့၏မျှော်လင့်ချက် – လွှတ်တော်ကဖော်ဆောင်ရွက်”” ဆိုသည့် လွှတ်တော်ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ စတင်ဆောင်ရွက်လာကြခြင်းပဲဖြစ်ပါ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယပိုင်းအနေဖြင့် ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာနှင့် အသနားခံစာဆိုင်ရာ ကော်မတီလုပ်ငန်းများအား ရှင်းပြသွား ခဲ့ပါသည်။ တတိယပိုင်းအနေဖြင့် ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၅)ရက်နေ့၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ယု ဇနဂါးဒင်းဟိုတယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့သောသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းအခမ်းအနား [...]
ဒီလထဲမှာ သတင်းမီဒီယာသမားတွေ အတော်လေးအပြောအဆိုခံရတာတွေ ကြားမိတော့ နားတစ်ရာတစ်ယောက်တော် တော်လေးကို စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရပါတော့ တယ်။ ဒီမိတ် (၁၀) ပါတီနဲ့ ဦးအောင်သိန်း လင်းတွေ့ဆုံတာကိုဖော်ပြတဲ့သတင်းတွေ မှာ အဓိပ်္ပာယ်လွဲချော်စွာဖော်ပြမှုတွေကြောင့် ဒီမီ (၁၀)ပါတီ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ် ပြီး ပြန်ရှင်းရတာဟာဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက် ခံသင့်ခံထိုက်တဲ့ကိစ္စမို့ဘာမှမပြောလိုပေ မယ့်။ Favourite News သတင်းဂျာနယ် အတွဲ (၃) အမှတ် (၁၂၉) မှာပါတဲ့ မစ်္စစ် ဟီလာရီကလင်တန်ပန်းချီပြခန်းရောက်တဲ့ ကိစ်္စမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်ဗိဿနိုး ပန်းချီပြခန်း ကိုသွားရောက်တဲ့ ကိစ်္စအပေါ်သတင်း ဂျာနယ်တွေမှာဖော်ပြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြိး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ က အတွင်းရေးမှူးဦးဦးလှစောက သတင်း ဂျာနယ်တွေရဲ့ အမှားမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဦးဦးလှစောတစ်ယောက်များ နားမလည် နိုင်ရှာလေဘူးရယ်လို့တွေ့မိပါရဲ့။ ဗိဿနိုး ပန်းချီပြခန်းမှာ ဟီလာရီကလင်တန် ကျွန်တော်တို့နဲ့ တွေတာဟာ အဲဒီပန်းချီ [...]
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
ဒီမိုကရေစီလိုချင်တဲ့သူတွေဟာ ဘယ်နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှ အားကိုးပြီးတော့ နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က လှုပ်ရှားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ လိုချင်ရင် ပြည်သူတွေမှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ AKM Continue reading...
အစိုးရ ရုံးဌာနတစ်ခုတွင် LUOJIA အမျိုးအစား ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးကို ဆိုင်ကယ်နံပါတ် တစ်ခုတည်းဖြင့် သုံးစွဲနေသည်ကို ယှဉ်တွဲတွေ့ရသည် Continue reading...
← Older posts	Hot News Journal Official Webpage ကို လာရောက်ဖတ်ရှုသူအပေါင်းကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ပြည်သူများကြားတွင်ဖြစ် ပေါ်နေသော Update သတင်းများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ကြိုးစားဖော်ပြသွားပါမည်။ Hot News Weekly ၏ Official Facebook ကိုလဲ ၀င်ရောက် Like လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် Webpage နည်းတူ Update သတင်းများကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင် ရှိပါသည်။Faces Media Group ၏ အထွေးဆုံး စာပေသားငယ်ဖြစ်သော The Hot News weekly journal သည် Vol-1,No.52 တွင် တစ်နှစ်သားပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ သားအကြီးဆုံး Faces မဂ္ဂဇင်း (10)နှစ်ပြည့်၊ သမီးလတ် ပေဖူးလွှာရသစုံ မဂ္ဂဇင်း(2) နှစ်ပြည့်နှင့် သားငယ် The Hot News Weekly journal (1) နှစ် ပြည့် သက်တမ်းကို ရောက်ရှိသည့်ထူးခြား သော နှစ်ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပေသည်။The Hot News Weekly journal အနေဖြင့် " Global Thinks, Local Act"ဟူသော ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ ခေတ်စနစ်နှင့် လျော်ညီသော ဒေသနှင့်ကိုက်ညီ သော နိုင်ငံအရေးတာဝန်များကို စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ပီသစွာဖြင့် အများပြည်သူ အကျိုးအတွက် ရဲရဲကြီး ဟောင်လျက်ပင် ရှိပါသည်။
နောက်ဆုံးထွက် ဂျာနယ် Download	Vol-3,No-141
ယခင်တစ်ပတ်ထွက် ဂျာနယ်	Vol-3,No-140
Advertising	FACES MAGAZINE & ပေဖူးလွှာ	Facebook	The Hot News ဂျာနယ်သို့ ဆက်သွယ်ရန်	လာရောက် ကြည့်ရှုသူများ	Counter site
Hot News Moblie Apk Download ရယူရန်	Hot News Mobile Application သည် Hot News စာဖတ်ပရိတ်သတ် မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟအပေါင်းတို့ထံ အချိန်တိုအတွင်း သတင်းအချက်အလက်များ ရောက်ရှိနိုင်ရန် သတင်းအချက် အလက်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် နှင့် သတင်းများကို Offline ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အစရှိ သော
ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးဆွဲထားပြီး Mobile Users များအတွက် အလွန်အသုံးဝင်မည့် application တစ်ခုဖြစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။ ဤ Hot News Mobile Application အား Install ပြုလုပ်လိုပါက http://www.bitmyanmar.com.mm/kanaung/hotnews တွင် မိမိတို့၏ Device များ (iOS or Android) ၏ Browser မှတစ်ဆင့် လာရောက် Download ပြုလုပ်ပြီး Install လုပ်နိုင်ပါသည်။အောက်ပါလင့်တွင်ဝင်ရောက်၍ ဒေါင်းလော့ရယူနိုင်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် မီဒီယာများတွေ့ဆုံပွဲ	Advertise Here The Hot News Weekly Journal Copyright © 2013. All Rights Reserved.